XOG: Waqtiga shirka Kismaayo uu furmayo oo aan ogaanay (Aqri) - Caasimada Online
Home Warar XOG: Waqtiga shirka Kismaayo uu furmayo oo aan ogaanay (Aqri)
XOG: Waqtiga shirka Kismaayo uu furmayo oo aan ogaanay (Aqri)
Warar xog ogaal ah oo ay heshay Caasimada Online ayaa sheegaya in 20-ka bishan la waqtiyeeyay in magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose uu ka furmo shirka lagu dhisayo maamul goboleedka JubbalalandState.
Go’aanka ayaa waxaa gaaray shan guddi oo dhowaan la sameeyay oo howshooda u ahayd qaban qaabinta shir weynaha. Shantaas guddi ayaa kala ah:- Guddiga Amniga, Guddiga Doorashada, Guddiga Xulitaanka, Guddiga Farsama iyo Maaliyadda iyo Guddiga ka Warqabka.
Sida Caasimada Online ay ka heshay ilo ka tirsan guddiga cusub, waxaa shirweynaha oo ka dhici doona Kismaayo 20-ka bishan, ka qeyb galaya 485 ergo oo ka kala imanaya gobollada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo.
Markaa kadib ayaa ergadu waxa ay ka doodi doontaa xeerka JubbalandState, kaasi oo ah sharciga aas aasi doona maamul goboleedka JubbalandState.
Ciidamada Kenya oo si ula kaca u Qarxiyay xarun ay leedahay Shirkada Hormuud
Sahra Xanaan - January 22, 2018
Ethiopia's Prime Minister Hailemariam Desalegn has rejected a call by Egypt for World Bank arbitration in a dispute over a hydroelectric dam Addis Ababa...